Dhageyso:-Shabaabkii ugu badnaa oo culeys saaray degaannada Galmudug - Awdinle Online
Dhageyso:-Shabaabkii ugu badnaa oo culeys saaray degaannada Galmudug
Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in Al-Shabaab waayadii dambe ay culeyska soo saareen degaannada galmudug, isla markaana falal amni darro ka abuureen.
Waxaa uu sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka kala yimid degaannada Jubbaland & Hir-Shabeelle ay buux dhaafiyeen degaannada Galmudug, hayeeshee ay ka hortageen.
Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in bilihii la soo dhaafay Ciidamada galmudug & kuwa dowladda Soomaaliya ay wadeen howlgallo ay uga hortagayeen culeyska ay degaannada maamulkaas soo saareen Al-Shabaab kuna guuleysteen.
Hadalka Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli bilihii la soo dhaafay uu xumaaday amniga degaannada Maamulkaas, isla markaana ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo lagu dilay Saraakiil Ciidan.
Previous articleAl-Shabaab oo weeraray saldhig ku yaal Gobolka Waqooyi Bari Kenya
Next articleSoomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika